I-Carpuride ikulethela i-Android Auto ne-CarPlay emotweni yakho endala | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | 22/06/2022 17:00 | Gadgets, General, Izibuyekezo
Izimoto zanamuhla zonke zigcwele izikrini kanye nokuxhumana kuzo zozine izinhlangothi, nokho, eminyakeni emihlanu edlule lokhu bekungajwayelekile, izikrini bezizincanyana kanye nokunye okungeyena wonke umuntu obezimisele ukukhokha uma besicubungula ukusebenza kwayo.
Kodwa-ke, izimoto ziyizinto ezihlala iminyaka eminingi, okwenze lezo ezingenakho ukuxhumana noma izikrini ezinkulu ziphelelwe yisikhathi kungazelelwe. Xazulula izinkinga zokuxhuma emotweni yakho nge-Carpuride, eletha i-Android Auto ne-CarPlay kalula.
2 Ukufakwa emotweni yakho
Lo mshini uyithebhulethi, njengoba ungase ucabange, imane iguqulelwe ngendlela efinyeleleka kakhulu emcabangweni wethebhulethi esingase siyihlanganise nemoto. KANYEEmpeleni, ithebhulethi yenziwe ngepulasitiki futhi inengaphambili lapho kugcinwa khona isikrini esingu-7 intshi. Uhlangothi olokuxhumana okuhlukahlukene okufana ne-AUX, ikhadi le-microSD ne-AV. Ngendlela efanayo, sinechweba le-AC lendabuko ukunikeza amandla, okubonakala kimi njengephuzu lokuqala elibi, bekuyobonakala kufanelekile ukusebenzisa ichweba le-USB-C elisivumela ukuba sisize ngokunenzuzo ukuxhumana kwemoto ngokwayo. .
2V kuya kukhebuli yoHlobo lwe-M ukuze unike amandla iCarpuride
ingalo enenkomishi yokumunca
Ikhebuli ye-AUX yesilisa
Imichilo yokunamathela enezinhlangothi ezimbili
Ukusekelwa komsizi we-Virtual
Idivayisi ihlanganisa izinhlobo ezimbili zezisekelo, isisekelo sobuso bedeshibhodi kanye nengalo yokubeka i-Carpuride engilazini. Ngokwami, inketho esebenza kakhulu futhi ngokuhambisana nezindinganiso zokuphepha ukunamathela ku I-Carpuride kudeshibhodi yemoto. Ngakho-ke, iphakheji ilula futhi ayinakho ukuzenzisa, okungenani siyaqaphela ukuthi ihlanganisa ifilimu yokuzivikela esikrinini.
Ungayithenga ngentengo engcono kakhulu njengoba uhlala e-Amazon, ungaphuthelwa leli thuba.
Ukufakwa emotweni yakho
Ukufakwa kulula kakhulu, futhi lokho mhlawumbe kungenye yezimpahla eziyinhloko zalo mkhiqizo, iqiniso lokuthi akudingi noma yiluphi uhlobo lokufakwa olushintsha ideshibhodi yemoto yethu, ngakho-ke, singavele siyifake ngezindlela ezimbili: Kuphakathi kokuthi sisebenzisa ingalo ye-telescopic enenkomishi yokumunca esikhulume ngayo ngaphambili, noma ngosekelo lwedeshibhodi, lokhu, Njengoba ngishilo ngaphambili, inketho ebonakala ilungile kimi.
Isikrini esingu-7″ esinokulungiswa kwe-FullHD
I-GPS Navigator Ehlanganisiwe
Isikrini sokuthinta esinamandla
I-Mirror Link enamadivayisi ahlukene
I-Apple CarPlay ne-Android Auto
Sizomane sisebenzise itheyiphu enezinhlangothi ezimbili bese sibeka ithebhulethi esisekelweni sayo. Manje sekuvela iphuzu elibi, kufanele sithathe indawo yokukhipha ugwayi ukuze sinikeze amandla idivayisi. Le-adaptha yamandla ayincane ncamashi, ngakho izothatha isikhala esiningi, kuhle ukuthi ubheke enye indlela. Nokho, lena kuzoba ikhebula lokuqala nelokugcina okufanele ngabe sithatha isikhala emotweni yethu ngenxa yeCarpuride.
Enye indlela ethokozisayo, uma unamakhono nesifiso sokwenza kanjalo, ukususa isiphetho sesokhethi kagwayi bese usidayisela izintambo esisokhethini esishiwo ngaphakathi ukuze ugweme izintambo "ngokusebenzisa", noma kunjalo, lokhu kuzovele kususe enkulu. ingxenye yomusa kudivayisi, okusho ukuthi, ayinakho ukufakwa.
Ngaphezu kwalokho, ukusekelwa kwedeshibhodi nakho kunehinge elincane, okungukuthi, sizokwazi ukulungisa i-engeli ngokumayo ukuze siyilungise kangcono nezidingo zethu, into ebaluleke kakhulu uma ucabangela uhlobo lwedivayisi, njengoba ukuphepha kokushayela kubaluleke kakhulu.
Kulokhu senze izivivinyo nge-Apple CarPlay, naphezu kokuthi idivayisi inohlelo lwayo lokusebenza. Nakuba kuyiqiniso ukuthi ukucushwa kokuqala kufanele kwenziwe ngesiNgisi, kamuva singafaka izilungiselelo zesistimu ukuze siguqule ulimi lube iSpanishi, lapho konke kuzohunyushwa ngokugcwele. Nokho, ngiyaqonda ukuthi inhloso enkulu iwukuba sikwazi ukusebenzisa i-Android Auto ne-Apple CarPlay, esingayenza kalula nangokungenantambo.
Sizokwenza isiqiniseko sokuthi sine-Bluetooth ne-WiFi ye-iPhone yethu exhunyiwe, Sizoya kuzilungiselelo ze-Carpuride futhi senze kusebenze ukubonakala kwe-Bluetooth. Uma sesiqedile, sizovele sixhume ku-Bluetooth yedivayisi futhi i-iPhone yethu (noma i-Android) izosiqondisa ngokuzenzakalelayo ukuthi sisebenzise inguqulo yemoto yesistimu yayo yokusebenza. Ngale ndlela siyakwazi ukufinyelela Apple CarPlay isebenza ngokugcwele futhi ayikho indlela yokuyihlukanisa ne-Apple CarPlay eyakhelwe ngaphakathi yanoma iyiphi enye imoto.
Manje sekuyisikhathi sokukhetha okuphumayo komsindo, ngoba nakuba iCarpuride inezipikha zayo, ngincoma ukusebenzisa noma iyiphi enye yezindlela zayo ezintathu zokuxhuma:
Usebenzisa umsindo ngaphandle yedivayisi nokokufaka okuyisizayo kwemoto yakho, usebenzisa ikhebula ethi Jack to Jack efakwe ebhokisini
Usebenzisa i- Umsakazi we-FM insiza
Usebenzisa i- Bluetooth
Ngincoma lokho uma esikufunayo kuyikhwalithi yomsindo nokuzinza, sisebenzisa okokufaka okusizayo uma kwenzeka sinayo futhi vele ikhebula elisha alisikhathazi. Nokho, ezinye izindlela ezisele zisebenza ngokulinganayo.
Ukuzulazula kumamenyu kuhle kakhulu, futhi kuyashesha, kanye nesivinini sokuphendula. Kukhona ukubambezeleka okuthile lapho usebenzisa i-CarPlay engenantambo futhi uqala ukudlala umculo noma i-podcast. Lokhu kubambezeleka kukhona futhi ku-CarPlay esemthethweni esivele ifakiwe kusuka efekthri, futhi yinto eqondene nohlelo olungenantambo, akuyona inkinga nge-CarPuride.
Inguqulo esiyihlaziyile iyatholakala ngentengo encintisana kakhulu yama-euro angama-219,99, endaweni yokuthengisa evamile njenge I-Amazon futhi lokho kusinika ukuvikeleka okuningi nesiqiniseko. Ngaphezu kwalokho, banesephulelo esengeziwe okwesikhashana sama-Euro angama-20 ngokusebenzisa ikhuphoni ngesikhathi sokubungaza lokhu kwaziswa. Futhi, Siphinde sibe nokukhetha ukuthola inguqulo ezoba nekhamera yangemuva futhi engasisiza ezindaweni zokupaka izimoto, nakuba kwenza ukufakwa kube nzima kakhulu.
Kuthunyelwe ku: 22 Juni ka-2022
Ukulungiswa kokugcina: 19 Juni ka-2022
Imbobo yokushaja yi-AC
akuhunyushwanga kahle kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » I-Carpuride ikulethela i-Android Auto ne-CarPlay emotweni yakho endala
I-Dreme D10 Plus, isicoci se-vacuum esizikhipha ngokuphelele [Ukuhlaziya]